Sheekada jaajuusaddii reer Masar Hibo Saliim ee sirdoonka Israa’iil dalkeeda u adeegsadeen qeybta 2aad | XORRIYA NEWS
Sheekada jaajuusaddii reer Masar Hibo Saliim ee sirdoonka Israa’iil dalkeeda u adeegsadeen qeybta 2aad
Wiilkii yahudka ahaa ayaa sidii yeelay oo dhalintii Ansaarta dhex galay kadiba meeshii katiriyay qaar kamid ah gabayadii dagaalkii bucaath oo ay rag badan ku dhinteen, markaas ayay kooxdii Ansaarta aheyd sheekadii u badaleen dhankii dagaalkii Bucaath iyo gabayadii laga tiriyay ayagoona u kala baxay Ows iyo Khazraj.
Markii doodii dheeraatay ayaa mid kamid ah Ansaartii oo careysan inta kacay yiri; “wlhi hadaad doontaan hadaan idiin kuugu soo celineynaa” asigoo kala jeeday in dagaalkii jaahiliyada hadii sheekada sii socoto soo celin doonaan markaas ayay kooxdii kale xanaaqeen misna yiraahdeen hadaad moodaan in la idinka cabsanaayo waa inoo goob hebla iyo waqti hebla.
Goobtii ayaa waxaa ka dhacay buuq iyo isu cagajugleyn ayadoona look ala baxay Ows iyo Khazraj kadibna dagaal la isku balansaday.
Markii la is balansaday ayay qolo kasta hubka qaateen isna guubaabiyeen ayagoo dagaal u tafo xeydanaayo wuxuuna Yahuudkii Shaash Bin Qeys qarka u fuulay in meesha dagaal culus oo muslimiinta dhexdooda lagu jabinaayo ka dhaco misna qorshihiisa dhagarta ahaa u guuleysto hadii uusan Nabiga scw joogi laheyn.
Markii dagaalkii la isku diyaariyay misna qarka loo fuulay inuu qarxo ayuu warkii gaaray Nabiga scw markaas ayuu Nabiga oo ay la socdaan Muhaajiriintii kusoo baxay wuxuuna u yimid Ansaartii oo dagaalkii isku diyaarineyso.
Nabiga scw ayaa markaas ku yiri; “Kulankii Muslimiintow Allaah Allaah ma dhawaaqii jaahiliyada ayaad isugu durbaan tumeysaan anigoo idin dhex joogo? Ma markii Allaah uu islaamka idinku soo hanuuniyay oo uu idinku sharfay arimihii jaahilnimadana idinka dabar jaray? Oo uu gaalnimo idinka badbaadiyay quluubtiinana isku soo dumay?” (miyaad dagaal jaahilnimo u tafo xeydanaysaan?)
Markaas ayay qoomkii ogaadeen inuu sheydaan soo dhex galay cadowgoodana dhagray ayagoona oohin jabsaday aadna uga xumaaday in dhagarta sheydaanka u jabeen markaas ayay ayagoo ooynaayo laabta is galiyeen hubkiina tureen.
Allaah ayaa ka damiyay dhagartii sheydaanka ee cadowga ilaahay Shaash Bin Qeys uu ku doonaayay inuu muslimiinta isku jabiyo.
Kaasi wuxuu ahaa tusaale yar oo ka hadlaayo dhagarta ay Yahuuda la dhex joogeen Musliinta.
Hadaba su’aasha waxay tahay sideey Banii Qeynu Qaac looga saaray magaalada Madiina.
Reer Banii Qeynu Qaac waxay ahaayeen Qabiil kamid ah sadaxii Qabiil ee Yahuuda kuwaasoo Madiina daganaa waxayna ku caan ahaayeen farsamada gacanta ayagoona badankooda Tumaal biraha garaaca ahaayeen sidaas owgeed helista hubka sida Seefaha iyo warmaha agtooda wax fudud ayuu ka ahaa.
Reer Banii Qeynu Qaac waxay ahaayeen Yahuuda Madiina kuwooda ugu geesisan ayagoona ahaa qabiilkii ugu horeeyay ee Nabiga scw balantii uga baxay.
Waxaa dhacday in maalin gabar carab ah ay suuqa Reer Banii Qeynu Qaac adeeg ka doonatay waxayna aheyd mid xijaaban oo asturan ilaa wajigeedana qarsanyahay markaas ayay damceen iney xijaabka ka furan si ay wajigeeda u arkaan balse gabadhii waa ay diiday.
Gabadhii markii ay diiday ayaa midkood ayadoon ka warqabin maradeeda gabal kamid ah meel ku xiray markaas ayaa markii ay istaagtay maradii ka dhacday oo cowradeeda banaanka imaaday.
Yahuudii ayaa markaas bilowday iney qosol afka jabsadaan halka gabadhiina ay qeylisay markii cowradeeda banaanka timid.
Nin muslimiinta kamid ah oo goobta joogay ayaa arinkii aad uga xumaaday wuxuuna ku booday Yahuudkii gabadha marada ka feyday asigoona qoorta ka gooyay, markaas ayay Yahuudii meesha joogtay isugu tageen Muslimkii ilaa ay ka dilaan.
Arintii ayaa waxay gaartay Nabiga scw waxaana uu go’aansaday in reer Banii Qeynu Qaac magaalada laga saaro maadaama ay balankii jabiyeen loona adkeysan Karin dhaqan xumadooda joogtada ah.
Nabiga scw ayaa Madiina uga tagay Abaa Labaaba Bin Cabdul-Mundir wuxuuna soo kaxeystay Muslimiintii ayadoo uu Calanka u siday Xamza bin Cabdul Mudalib waxayna nabiga scw iyo ciidankiisii kor Yimaadeen Yahuudii.
Yahuudii markii ay maqleen in Nabiga scw iyo ciidankiisa usoo socdaan ayay ayay qalcadahoodii dhufeys adag ka dhigteen nabigana scw markuu kor yimid ayuu go’doon saaray waxayna maalintaas aheyd maalin Sabti ah 15tii bishii Shawaal sanadkii 2aad ee Hijriga waxaana dagaalkii Beder laga joogaa qiyaastii mudo bil ah.
Nabiga scw iyo muslimiintii waxay go’doomiyeen Yahuudii ayadoo uu go’doonka socday mudo 15 maalmood ah kadibna waxaa dhacday in Allaah uu quluubtooda ku beeray argagax iyo cabsi markaas ayay isi soo dhiibeen ayagoona xukunkii Nabiga scw u qoor keentay waxayna soo wareejiyeen qoortooda hubkooda maalkoodanaagahooda iyo duriyadoodaba.
Nabiga ayaana ku amray iney magaalada isaga baxaan oo meel uu joogo daris kula noqonin waxaana laga reebay hubkoodii iyo maalkoodii qaniimo ahaan ayadoona muslimiinta loo qeybiyay.
Benii Qeynu Qaac markii naftooda loo cafiyay ayay u baqooleen dhankaas iyo Shaam balse waxbadan kama soo wareegan oo Allaah ayaa intooda badan halaagay.
La soco qeybta 3aad..